ဗုဒ္ဓပေးခဲ့သော ကတိရှိသလား | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဗုဒ္ဓပေးခဲ့သော ကတိရှိသလား	Posted by mm thinker on July 23, 2008
Posted in: Philosophy, Religion.	Tagged: Philosophy, Religion.	(Did the Buddha Make Any Promise?)
ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်ကို ဘာသာတရာအနေဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း (အပိုင်း-၇)
Buddhism As A Religion (Part-7)
ဗုဒ္ဓဘုရားသည် နောက်လိုက်တပည့်အဖြစ် ခံယူသူများကို နတ်ဘုံချမ်းသာနှင့် ဆုလာဘ်များပေးမည်ဟုလည်းကောင်း၊ သူ့အား ယုံကြည်ကိုးစားသူများကို ဒုက္ခအနှောင်အဖွဲ့မှ ကယ်တင်ခြင်းပြုမည်ဟုလည်းကောင်း ကတိခံဝန်ချက်ပေးတော်မမူချေ။ ဗုဒ္ဓ၏အလိုအရ ဘာသာတရားဟူသည် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီမှု ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်မဟုတ်ပေ။ မဂ်ဖိုလ်တည်းဟူသော ဉာဏ်အလင်းရရှိစေရန်နှင့် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားမှ လွတ်ငြိမ်းရန် မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောဘဝကို ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းတစ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည် ပညာဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်စိစစ်မှု စိုးစဉ်းမျှမရှိဘဲ မျက်ကန်းယုံကြည်မှုသာရှိသော နောက်လိုက်သာဝကများကို အလိုမရှိပေ။ လူသားတို့အား ဆင်ခြင်တွေးခေါ်ခြင်းအားဖြင့် သိမြင်နားလည်မှုကို ရရှိစေလိုသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားသည် လူသားဝါဒ၊ လူ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှု မရှိခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းနှင့် သာယာငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ ဦးဆောင်စိုးမိုးသည့် မြင့်မြတ်သောဘ၀နေထိုင်မှု လမ်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တုန့်ပြန်လက်စားချေခြင်း၊ ရန်ငြိုးပဋိဃဖွဲ့မှု၊ သူတစ်ပါးကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုနှင့် စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာမှု အာဃာတတရား စသည်တို့ကား ဗုဒ္ဓတရားတော်၌ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဆိုသလို အကျူံးဝင်မှု မရှိပေ။
ဘာသာအယူဝါဒအား ဇွတ်မှိတ်ယုံကြည်သော အယူသီးမှုများကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရှေ့နောက်ဆင်ခြင်တိုင်းထွာမှုရှိသော ဆင်ခြင်တုံတရား (Rationalism) ကိုဖော်ထုတ်မြှင့်တင်ပေးခဲ့သော ကမ္ဘာ့ ၀ိဘဇ္ဇဝါဒီမြတ်ဗုဒ္ဓသည် လူသားတို့၏ အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းရှင် ဘုန်းတော်ကြီးတို့၏ အပေါ်စီဒယူချုပ်ချယ်ခြယ်လှယ် လွှမ်းမိုးမှု အပိတ်အပင်ထဲမှ လူသားကို လွတ်မြောက်စေခဲ့သူကား ဗုဒ္ဓရှင်တော်မှတစ်ပါး အခြားမရှိပေ။ ဘာသာတရားကို အာဏာကုန်လွှဲအပ်ပေးသည့်စနစ် (Religious Dictatorship) နှင့် အတုအပအယောင်ဆောင်ကာ လိမ်ညာလှည့်ဖြားသော ကြောင်သူတော်လုပ်ရပ် (Hypocrisy) တို့၏ အချုပ်အနှောင် သံသရာမှ လူသားအား လွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်ကို ပထမဆုံး ညွှန်ပြခဲ့သူမှာလည်း ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပင်ဖြစ်သည်မှာ ယုံမှားစရာမရှိပေ။
ဗုဒ္ဓရှင်တော် ပွင့်ထွန်းသော အချိန်တွင် သတ္တ၀ါများကို သတ်ဖြတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်မှုများ၊ ပူဇော်ပသမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများသည်သာ မည်သည့် ကျင့်ကြံမှုမျိုးထက်မဆို ပို၍မွန်မြတ်သည်ဟု ထင်မှတ်ယူဆနေခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အမြင်တွင်မူ မည်သည့်ဘာသာရေးအကျင့်အကြံမျှ ယင်းတို့လောက် လူသားအတွက် အရှက်မဲ့ အကျိုးနည်းမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနိမ့်ကျစေမှု မရှိဟူ၍ ဖြစ်၏။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဟူသည် နတ်ဘုရားတို့ကို လာဘ်ထိုးခြင်းမှတပါး အခြားမဟုတ်ပေ။ လာဘ်သပ်ပကာပေးခြင်းနှင့် မရိုးမဖြောင့်ခြင်း အဂတိမှုဖြင့် လွတ်မြောက်ချမ်းသာမှုဟူသည် မိမိကိုယ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားသော လူကောင်းသူမြတ်တို့ လိုလားတောင့်တသည့်အရာ မဟုတ်ပေ။
← အော်တိုကရေစီ	သင်ကာ၏ ပါဠိစာပေမှတ်စု →	Pages	about